Arin Xiiso Badan: Ranbir kapoor Oo Ugu Dambayntii Shaaca Ka Qaaday Xaalada Xiriirkiisa - Hablaha Media Network
Arin Xiiso Badan: Ranbir kapoor Oo Ugu Dambayntii Shaaca Ka Qaaday Xaalada Xiriirkiisa
HMN:- Ayadoo dhawaan loo wada dabaal dagayay sanad guuradii Randhir Kapoor oo adeer u ah Ranbir Kapoor xidigaan ayaa shaaca ka qaaday xaalada xiriirkiisa.
Hagaag, Ranbir Isagoo haysta ama ku xiranyihiin Taageera Aad Culus ama tiro Badan, Wiikaan xidiga ah Taageeradiisa badanaa waa Gabdho waxa uuna Niyad jabiyay markii uu xiriirka u jaray Katrina kaif, laakiin xiriirkiisa Cusub waxa uu noqon doonaa mid labrto Hubaashii.
Atoorahaan waxa uu ka qayb galay xafladii dhalasho ee Randhir kapoor Indhaha oo dhan isaga ayay hayeen, Isaga oo sameeyay Isbadal uu ku laba laabayo horay ugu soconayo Kabihii Sanjay Dutt oo ku aadan Raj Kumar Hirani filimkiisa xiga, Isagoo Huba In si gaar ah loo eegayo, laakiin sababta kale ee uu ka xaday Dareenka waa isagoo loogu dhawaaqayo “Wali waa Kali” Still Single’.
Intaa kadib waxaa la arkay Rekha oo daanka jiidaysa kuna dhahaysa “”Nazar Utaro” oo ay ula jeedo “Ila fiiriya sida uu isku badalay Ranbir!:
Sidoo kale waxaa la arkayay isagoo wada hadal layeelanaya Seedigiisa Saif Ali Khan cabitaana lacabaya Inaadeerkii Armaan Jain iyo Hooyo Neetu Kapoor.
Hadii aan fiirino shaqada Horta taala Atoorahaan waxa uu Indhaha ku hayaa Filimka Jagga Jasoos oo la jilayso jacaylkiisii hore Katrina kaif, Labadoodu waxay umuuqdaan wadajir cajiib Kadib markay muddo dheer filim kasoo wada muuqan.
Hada waxa uu duubayaa filimka looga hadlayo Nolosha Sanjay Dutt oo uu director kayahay filim sameeye Raj Kumar Hirani waxa soo saare ka ah Raj Kumar Hirani iyo Vidhu Vinod Chopra.
F.G: Warbixintaan Waxaa Nala Wadaagay Soona Turjumay Aqriste Ahmed Saleebaan Ali